Ithegi: abathengisi | Martech Zone
Kukho amaxesha esiye sizibuze, njengabathengisi, ukuba inkcitho yethu iqhuba njani xa kuthelekiswa nabanye abathengisi kwishishini lethu okanye kwisitishi esithile. Iinkqubo zeBenchmark ziyilelwe ngenxa yesi sizathu-kwaye i-Sellics inengxelo yasimahla, ebanzi yokulinganisa kwiAkhawunti yakho yeNtengiso yeAmazon ukuthelekisa ukusebenza kwakho kwabanye. Intengiso yeAmazon yentengiso yeAmazon ibonelela ngeendlela abathengisi ukuba baphucule ukubonakala kwabathengi ukuze bafumane, bakhangele, kwaye bathengele iimveliso.
NgoMvulo, Aprili 9, 2018 NgoLwesibini, Aprili 10, 2018 UChad Pollitt
Njengoko bekutshiwo ngaphambili kuyo yonke into ekufuneka uyazi malunga neArtificial Intelligence kunye neempembelelo zayo kwi-PPC, eNative, nakwiNtengiso yokuBonisa, eli linxalenye ezimbini zamanqaku ezijolise kwimithombo yeendaba ehlawulelweyo, ubukrelekrele bokwenziwa kunye nentengiso yemveli. Ndichithe iinyanga ezininzi ezidlulileyo ndiqhuba isixa esikhulu sophando kwezi ndawo ziye zafikelela kupapasho lweencwadi ezimbini zasimahla. Eyokuqala, Yonke into ekufuneka uyazi malunga neNtengiso yoHlahlo kunye neArtificial Intelligence,